Asɛm Bi a Ɛkyere Adwene—Onipa Wu a, Ɔbɛkɔ So Atena Ase Anaa?
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Ɔsom atitiriw dodow no ara mu nnipa gye di sɛ onipa wɔ ɔkra a enwu da
Asɛm Bi a Ɛkyere Adwene
OWU ne nkwa ho adwene a nnipa wɔ no dɔɔso, na ɛsono nea obiara ka. Ebinom adwene yɛ wɔn sɛ, sɛ wowu a wɔbɛkɔ so atena ase. Wosusuw sɛ ebia wɔbɛdan biribi foforo anaa wɔbɛkɔ akɔtena baabi foforo. Afoforo nso adwene yɛ wɔn sɛ wɔbɛsan awo wɔn ama wɔabɛtena ase bio. Afoforo nso deɛ, wɔn adwene ne sɛ onipa wu a, na asa.
Baabi a yɛtetee wo anaa abusua a wufi mu nti, ebia wowɔ nea wugye di wɔ asɛm yi ho. Baabi a yewu a yɛkɔ no, nnipa dodow no ara wɔ adwene pii wɔ ho. Enti saa asɛm a ɛkyere adwene yi, obi wɔ hɔ a obetumi ama yɛanya ho nkyerɛkyerɛmu a ɛtɔ asom na ɛyɛ nokware? Anaa yebenya wɔ baabi?
Mfehaha pii ni na nyamesom akannifo akyerɛkyerɛ sɛ onipa wɔ ɔkra a enwu da. Ɔsom atitiriw dodow no ara mu nnipa gye di sɛ onipa wɔ ɔkra a enwu da; Kristofo, Hindufo, Yudafo, Nkramofo, ne ɔsom afoforo. Wɔkyerɛ sɛ, sɛ onipa wu a, ɔkra no deɛ enwu, na mmom efi nipadua no mu kɔtena ahonhom atenae. Nanso Buddhafo deɛ, wogye di sɛ sɛ obi wu na wɔsan wo no mpɛn pii a, tumi a ɛwɔ ne mu anaa n’adwene mu no bɛkɔ anigye tebea bi mu. Ɛno na wɔfrɛ no Nirvana.
Saa nkyerɛkyerɛ ahorow yi nti, nnipa a wɔwɔ wiase dodow no ara abegye adi sɛ ehia sɛ obi wu na ama watumi akɔ wiase foforo bi mu. Saa gyidi no ama nnipa pii anya adwene sɛ gyama Onyankopɔn bɔɔ owu kaa nnipa ho, enti wɔn adwene yɛ wɔn sɛ gye sɛ obi wu ansa na wanya asetena foforo. Nanso dɛn na Bible ka fa saa asɛm yi ho? Yɛsrɛ wo, kenkan asɛm a edi hɔ no. Ebia mmuae a wubenya no bɛyɛ wo nwonwa.